Xawaaraha Xawaaraha Sare ee Internetka; Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaashu waxay bilaabi doonaan hawlgal cusub khadadka Xawaaraha Sare ee loo yaqaan 'Speed ​​Speed ​​Train (YHT)' ee 2020 waxayna bilaabi doonaan adeegyo muujinaya dariiqooyinka loo yaqaan 'YHT' si loo wanaajiyo tayada. Hürriyet [More ...]
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha ayaa awooday inay daabacdo warbixinteeda ku saabsan musiibada tareenka ee magaalada Çorlu maalin ka dib 416. Warbixinta dhexdeeda, iyadoo ay wasaaraddu isku dayeyso inay muujiso dabeecadda saraakiisha la xariirta masiibada tareenka 'mid caadi ah', casriyeynta nidaamka iyo ogaanshaha goor hore. [More ...]
Muxuu Yahay Mashruuca Wadada Xariirku? : Sanadihii la soo dhaafay, waxaa jiray horumarro muhiim ah oo ku saabsan saadka ee adduunka. Mid ka mid ah horumaradan ayaa ah awooda dhaqaale ee cusub ee ay China ka saartay. In kasta oo noocyo badan oo aduunyadu ay maalgashiyadooda ugu toosiyaan waddankan, [More ...]